ကဝေများအကြောင်း ( ဂဇက်ရွာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကဝေများအကြောင်း ( ဂဇက်ရွာ )
ကဝေများအကြောင်း ( ဂဇက်ရွာ )
Posted by sorrow on Sep 28, 2013 in My Dear Diary | 58 comments
အနှီမှော်ဆန်သော virtual community ထဲသို့ ကျွန်ုပ် လွန်လေပြီးသော တစ်နှစ်ခန့်က မျက်စိလည် လမ်းမှားရောက်ခဲ့လေသည် ။
” ဟဲ့ ကောင်မလေး …ဒါပဲလုပ်နေတယ် ဟတ်လား ” ဟု မည်သည့်အရာကို ဖတ်နေမှန်းမသိသော ကျွန်ုပ် ၀န်ထမ်းကို ဟောက်စားလုပ်လိုက်သည်။
ဇက်ကလေးပုရင်း ပိတ်လိုက်သည့်ခဏတွင် ကျွန်ုပ်လည်း..မြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်လေသည်…myanmargazette.net ဟူသောလိပ်စာ
ကျွန်ုပ်သည် ရုပ်ရည်ချောမောခန့်ညားသလောက် စပ်စုတတ်သောသူဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှ စပြီး မှော်အောင်သောသူများကို သိကျွမ်းခွင့်ရခဲ့လေသည် ( တစ်ဖက်သတ် ) ။
( နံပါတ် 12 အောက်က အနီရောင် စည်းကမ်းနှင့် ညှိနေမလားတော့မပြောတတ် ) ( မှတ်ချက်ပြုပါမည် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ကချင်ကွ…ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ အာဟိ )
ပထမဆုံး မှတ်ချက်ပြုရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အရှေ့ကျွန်းမှ ဖြုံလောက်သည့် မာကတ္တာ ဖိန့်ဖိန့်တုန် အင်ဇာဂီ
အနှီပထမတန်းစား အမျိုးသားကလေး၏ ( မုန့်ဟင်းခါး ပိုစ့် .ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်မျိုး ဖားသက်ပြင်းရဲ့ မားကတ်တင်း ပါခင်ဗျား ) ထိုကဲ့သို့အင်ထရိုဝင်ထားသည့်ပို့စ် နှင့်.Branding အကြောင်းရေးထားသည့် ပိုစ့် ကို ဖတ်မိသည့် တခဏတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်
လေကြောင်းလိုင်းကြီးတွင် Sales & Marketing Manager လုပ်ဖူးသည့် အတိတ်ကို ပြန်သွားပြီး မားကတ်တင်းအကြောင်း
တစိုးတစိမှ နားမလည်ပဲ လစာအထပ်လိုက်ယူမိသည့် သုံးနှစ်တာ နေ့ရက်များကို Back Date ဖြင့် လစာပြန်အမ်းပေးချင်စိတ်ပေါက်သွားသည် ။
( ဤနေရာမှနေပြီး …အင်မတန်လေးစားကြောင်းပြောလိုပါသည် ဆရာဂီ ။ )
ထိုနေ့မှ စပြီး ကျွန်ုပ်သည် ဆြာဂီ၏ ပရိသတ်
ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မှာ သိမ်မွှေ့နိမ့်ချခြင်း အပြည့်ရှိသလောက် ဥာဏ်ရည်မြင့်သော ချစ်လှစွာသော အဘဖော
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် စီးရီးများ ၏ ဖမ်းစားမှုအောက်တွင် အမှန်တကယ် စဉ်းစားမိပါသည် ။ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကမ္ဘာ့ ဖြစ်ရပ်များကို ချိန်ထိုးကြည့်နိုင်သော အတွေးအခေါ်များကို မွေးဖွားစေသည့်အဘဖော ကို လေးစားသည်ကို သိစေလိုပါသည် ။
တခြား ကဝေများအနေနှင့် နှစ်သက်သဘောကျသည်များမှာ..
မည့်သို့မည်ပုံရေးသည်ကားမသိ…ကော်မန့်များတွင် မခရစ်နှင့် မကြေးမုံ တို့ကား မည်သို့ခံစားရမည် မသိ …ကျွန်ုပ် ယောက်ျားအရင့်အမာကြီးပင် ဖိန်းတိန်းတိန်း ရှိန်းတိန်းတိန်း ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံရေး ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော သူ၏မှတ်ချက်များကို မှတ်သားရသည်အထိ လက်စွမ်းထက်သည့် ဂဇက်ကဝေတစ်ပါး
ဲပြင်ဦးလွင်သား စီနီယာ ဖြစ်သည့်အပြင် သရုပ်ဖော်စာပေ အရေးကောင်းသူတစ်ပါး
3) ကိုသော်ဇင် (လွိုင်ကော် )
ပို့စ်တစ်ခုရေးပြီး ရင်ဘတ်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ရာကို နှိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသူ
ထောင်ထွက်ကြီးမိုက် ပိုစ့် …ပိုစ့်တစ်ခုတွင် မှတ်သားလောက်သည့် မက်ဆေ့ တစ်ခုပေးနိုင်သူ
5) မမ KZ ။ wow ။ မနှင်းဖြူ
ခင်ဖို့ကောင်းသူများ ( ရွာအင်္ဂါရပ်နှင့် ပြည့်စုံရန် ကွမ်းတောင်ကိုင်များရှိသင့်သည် မဟုတ်ပါလား )
အနှီကောင်လေးကား ရွာ၏ဖော်ရွှေရည်မွန်သော ကာလသားဖြစ်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံးပို့စ်ဖြစ်သော ရိုမီရိုအပိုင်း တစ်တွင် အားပေးစကားရေးပေးခဲ့သော သူ၏မှတ်ချက်သည် ရွာတွင် စာရေးသားဖြစ်ရန် အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်ခဲ့သည့် အတွက် အင်မတန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည် ။
ကလောင်သွက်သလောက် ကဗျာအရေးကောင်းသူ ။ ရွာ၏ ဖော်ရွေသော ကာလသားခေါင်း
ယခုနောက်ပိုင်းပို့စ်တင်တာ နည်းသွားသည် ( သူကြီးကို စိတ်အနာကြီးနာသည်ထင် အဟီး ) ။ ဓါတ်ပုံပို့စ်များကို တခုတ်တရ စောင့်ဖတ်ရသည်အထိ လက်စွမ်းထက်သူတစ်ပါး
( အခမဲ့ပို့စ် ) အလွန်နှစ်သက်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော ပေါတောတောနှင့်အသဲကွဲစာမှ လွဲပြီးမရေးတတ်သောသူကိုပင် အားပေးတတ်သူ
10 ) ဆြာကျော်စွာခေါင်
ပန်းချီ ၊ ကဗျာ ၊ သရုပ်ဖော်စာပေ ဘာရေးရေးဖြစ်နေသည့် အပြင် ဦးနှောက်အကောင်းစားပိုင်ရှင် ( ဒူးဝါးလေးဟု ခေါ်တတ်သည့် အခေါ်အဝေါ်ကိုလဲ အလွန်သဘောကျပါသည် ကျွန်ုပ်တို့ကတကယ်လဲ ဒူးဝါးမျိုး အာဟိ )
11) အရီးခင် နှင့် အန်တီမမ
မှတ်ချက်များကို စောင့်ဖတ်ရသည်အထိ တန်ဖိုးရှိသော မှတ်ချက်များကို ပေးနိုင်သူ ရွာလူကြီးများ
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး (စဖတ်မိသည့်အပိုင်းကား အဟီး ညိုညစ်ညစ် အိပ်ယာပေါ်တွင် မင်းသားက ပထမဆုံးလက်တည့်စမ်းသည့်အခန်း )
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာသည်အထိ လက်စွမ်းထက်သောသူပါတကား ဟု ထင်မိသည့်ခဏတွင် အပိုင်းတစ်မှ စဖတ်မိလေသည် ။
ကချင်အလံတင်ထားသည်မှ စပြီး အလွတ်ကို ခင်မိပါသည် ။ ( လူမျိုးစွဲ သိပ်မရှိရှာဘူး ငါ့နှယ့် )
14 ) သူကြီး ( ဟာဂျီ အယာတိုလာ မာမွတ် မိုးပြာ ဦးခိုင် )
သူ၏မှတ်ချက်များ ။ အရင့်ရောင်ပို့များနှင့် လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ကို မျိုးစေ့ချပေးသူအဖြစ် လေးစားပါသည် ။
သို့သော်ရွာသားများကို သိပ်အဖက်မလုပ်သည်ကား ဘ၀င်မကျပါ ။ တိတိပပပြောရလျှင်တော့..ကြိတ်လေးစားသည်ကို ၀န်ခံလိုပါသည် ။ ဤမှ နေချင်စဖွယ် ကောင်းသော ရွာကို တည်ထောင်ပေးသည့်အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည် ။
သို့သော် ပို့စ် ဒါဇင်ကျော် ရေးသော်လည်း တစိမှအဖက်မလုပ် ( ကော်မန့်သူ့ဆီက တခုမှမရ ) သည်ကို စိတ်နာပါသည် ။ရွာထဲတွင်လည်း ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ ပေါတောတော လူရွှင်တော်များ လိုအပ်သည်ကို သတိမမူသည်လောကား မပြောတတ် ။ ဤ ပို့စ်တွင်မှ သူ၏ ကော်မန့်မရခဲ့လျှင် ဆက်မရေးတော့ပါ ။ ( ရွာအပြင်မှသာခိုးဖတ်ပါတော့မည် အဟီး ) ကျွန်ုပ်၏ ရုံးတွင်လည်း မန်းဂဇက်ကိုဖတ်သည့် ၀န်ထမ်းရှိပါက သတိပေးစာထုတ်ပါမည် ။ ဒုတိယအကြိမ်ဖောက်ဖျက်ပါက အလုပ်ထုတ်ပါမည် ။ (မနိုင် နိုင်ရာပဲ ..စိတ်ကြီးတယ် ကချင်တွေက အဟီး ) ။
သို့သော်လည်း အင်မတန်မှနေပျော်ပါသည် ။ ခင်မင်စရာကောင်းလွန်းလှသောလူများနှင့် ပညာရစရာများလွန်းသော ဤရွာသားဖြစ်ရခြင်းကို အလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်း သူကြီး သိစေလိုပါသည် ။
ပုံ ..Sorrow Weaver ( မေတ္တာရှင် )
ဒီမှာ ကွန်မန့် မရယင် ရေးဒေါ့ဘူးဒဲ့ …
မပေးယင် ကျုပ်လည်း ရေးဒေါ့ဘူးးးးး
(စကားမစပ် ယာဒူးလေးပါ တပ်ပေးလိုက်ဘာလားလို့)
ညီငေးးကို အားဂျီး ကျေးဇူးဘာဘဲ … ငှီးးငှီးးးး
ချောလှတဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ရည်အစား ကချင်အလံကို တင်ထားတာပါဗျား ၊
အဲ အဲ နီသဟ
အဲ့ရာကိုပြောတာပေါ့.ဦးဦးသန့်ရ..လူတွေများ . ကချင်ကောင်တွေကိုကျတော့ကြည့်မရဘူး…Z အဘောက်တို့ M ဆိုင်းလု တို့ awng seng တို့ ကျ ပစ်မှားတယ်…အဲ့ရာကောင်းရား….
မက္ကာတခေါက်မှ မရောက်ပဲ.. ဟာဂျီဘွဲ့တတ်ထားတာကို.. စပြောချင်တယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မသေခင်တော့.. တခေါက်ရောက်ချင်တဲ့နေရာပါပဲ..
ကျောင်းသားဘ၀ထဲက… ကျုပ်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေထဲ.. ကချင်တွေအများကြီးပဲ…။
တခြားတိုင်းရင်းသားတွေထက်… ကချင်တွေနဲ့ ပိုအကြောတည့်သဗျ….။
မြန်မာပြည်ထဲ.. အရောက်ချင်ဆုံးနေရာကလည်း.. ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲ…။
အဘူတန်ရာဇီ ဆိုလား.. အမည်ရတောင်ကိုပေါ့…။
အဟီး…သူကြီးကို စိတ်ကောက်ပြေသွားပြီ ..အဟီးးးး
ပရောဂမှန်တော့ တုန်ဆင်းလာတာတွေ့လား..သဂျီးက ခင်ဗျားလိုလူကို
သဂျီးကို မက္ကာ ပို့ဖို့ စပွန်ဆာပေးလိုက်ပါအုံး
အဲရာလေး ( JEDDAH ) မက္ကာကို ရန်ကုန်က သွားတဲ့ အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပဲဗျ…Muslim Meal တောင်းပေးမယ် ။ ကီလို သုံးဆယ် ရမယ် ။ ရမ်ဇမ် ရေ ငါးလီတာ တစ်ပုံးသယ်လို့ရမယ်…ဈေးက လက်ရှိ USD 1500 ၀န်းကျင်ရှိမယ် ။ အောက်တိုဘာလထဲ ဆုတောင်းကွင်းမပိတ်ခင်အထိရမယ် ။ အာဟိ
မားကက်တင်းကျွမ်းပုံများ.. စကားတောင်သိပ်မဟလိုက်ရဘူး.. ထိုးရောင်းနေပြီ…
ကျုပ်သောက်နေကျ.. ၀ိုင်ပုလင်းသယ်ခွင့်ရရင်.. လိုက်မယ်ဗျာ..။
တလောကတင်… စိတ်ဝင်စားလို့.. အဲဒီခရီးစဉ်အကြောင်းဒေါ့ကျူမန့်ထရီထိုင်ကြည့်နေတာ… လူသန်းချီပြီးသွားလာကြတာမှာ.. ငြိ်မ်လို့..။ ဘုရားရိပ်တရားရိပ်နဲ့ပေါ့..
ခိုးတာဝှက်တာကလည်း.. မရှိ..။ အမူးသမားလည်းမရှိ…။ အကုန်လိုလို.. ၀တ်ဖြူတွေနဲ့..။ တချို့ကတုံးတုံးကြတယ်..။
အဲဒီလည်ပါတ်ငွေနဲ့တင်.. ဆောဒီမင်းသား.. ဘီလျှံနာဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်..။
သများတို့ကတော့ အဲဒီကဝေတောကို ရောက်ပြီးကတည်းကမထွက်နိုင်တော့တာ ခုချိန်ထိပဲ
ခွီးးးးး ..ဟိုခြောက်မျက်နှာကောင်လေး အကြောင်းရေးပြီးတော့ မွန်မွန်နဲ့ အလုပ်တူလို့ မွန်မွန်ရေးတဲ့ တိုးရစ်ဇင်အကြောင်းတွေဖတ်တဲ့အကြောင်းထည့်ရေးဖို့မေ့တွားတယ်…ဆောတီးကွယ်
နာ့အဖေက ရှမ်း..အမေက ကယား..
ekk ဟုတ်ရယ်..နာ့ကိုလာလာကညော့တဲ့ ကောင်မလေးကျန်ခဲ့တယ်… အဟီး
ဂဇတ်ရဲ့ ကဝေများ အကြောင်းကိုဝင်လေ့လာလိုက်ပါတယ်…..
နောက်များမှာ အဆင်ပြေရင်တော့ ကဝေများအကြောင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့
တစ္ဆေ သရဲများအကြောင်း မြေဘုတ်ဘီလူး များအကြောင်းရေးပေးပါအုံးဗျ…..
နာမည် သာ ပြောင်းထားတာ
ခီညားရဲ့ ကဝေစာရင်းထဲ ပါနေပါလာဗျ
ကျွန်တော် လုပ်မယ့် ကဝေစာရင်းထဲလည်း
…… စ” တာ..။
ဒူးဝါးလေးလို့ ခေါ်ရတာ ပိုပြီး နင့်နင့်နဲနဲ ဖြစ်လို့ ခေါ်တာ..။
ကချင်သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်.. အားကြီး ချစ်ခင်ဘို့ ကောင်းတယ်..။
အားလီ… ကို ဒေါင်ဂျူန်း…ကိုဆိုင်းမွန်းအောင်..တဲ့ နောက်ရှိသေးတယ်..။
ဦးခေါင် …ဟုတ်ရယ်..ကျော်က စုန်းမဂျီး. ..မေဂရေ့ ပယ်ရီလေး ဖမ်းစားမို့လုပ်နေတယ်..အဟီး
” ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မှာ ၊ သိမ်မွှေ့နိမ့်ချခြင်း အပြည့်ရှိသလောက် ၊
ဥာဏ်ရည်မြင့်သော ချစ်လှစွာသော အဘဖော ”
ပထမ ဦးဆုံးအနေနှင့်ကတော့ ၊
စာကိုလည်း ကြိုက်တယ် ၊ လူကိုလဲ လေးစားတယ်လို့ ၊ ဆိုထားသတော့ ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ကို sorrow weaver ရေ ။
အင်းးးးးး ၊ မှန်တာပြောရရင်တော့ ၊
” သိမ်မွှေ့နိမ့်ချခြင်း အပြည့်ရှိ ” ဆိုတဲ့ စကား နှင့်တော့ ကျနော် မထိုက်တန်ပါဘူး ။
၁ ။ ပထမ ၊ သိမ်မွှေ့ခြင်း ။
ကျနော် ရေးသားတဲ့ စာတွေထဲမှာ ဆဲဆို ခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားခြင်း မပြုခဲ့ပေမယ့် ၊
ကျနော့်ရဲ့ အပြင်ဘဝမှာ တော့ ၊ ကျနော်ဟာ သင်္ဘောသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြမ်းတမ်းပါတယ် ။
၂ ။ ဒုတိယ ၊ နှိမ့်ချခြင်း ။
အဲဒီ တစ်ခု ကတော့ တော်တော် လွဲပါတယ် ။
ကျနော်ဟာ Arrogant အဆင့်ရောက်အောင် မေါက်မာခြင်း မရှိသော်ငြားလည်း ၊
ကျနော့်ရဲ့ Character ဟာ နှိမ့်ချခြင်း ရှိတဲ့ပုံ ( အပြင်ဘဝ မှာကော ၊ စာထဲ မှာပါ ) မရှိပါဘူး ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ ခပ်ကြွားကြွား ပုံစံတောင် ရှိပါတယ် ( ဒါပေမယ် မမှန် မရှိ တာကိုတော့ ချဲ့ကား မကြွားပါဘူး ) ။
၃ ။ ကို sorrow weaver က နှိမ့်ချခြင်း ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆ မိလောက်တဲ့ အချက်က ၊
ကျနော့်ကို ဆဲဆိုခြင်း ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ခြင်း ပြုတဲ့စာတွေကို ပြန်လှန် ချေပခြင်း မပြုတာပဲဖြစ်မယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဲဒီ အခြေ အနေ မှာ ကျနော်က ပြန်လှန် ချေပခြင်း မပြုတာဟာ ၊
ကျနော့်မှာ ၊ နှိမ့်ချခြင်း စွမ်းရည်တွေ အရမ်းပြည့်ဝနေလို့ မဟုတ်ပဲ ၊
အဲဒီ့ ဆဲဆိုခြင်း ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ခြင်း ပြုတဲ့သူတွေဟာ ၊
ကျနော် လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အတွေးအခေါ် နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မရှိဘူးလို့ ၊
ကျနော်က ယူဆတဲ့ အတွက် ၊ ကျနော်က အကြောင်း မပြန် / ဥပေက္ခာ ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါဟာ ကျနော့်မှာ နှိမ့်ချခြင်း စွမ်းရည်တွေ ပြည့်ဝနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အခြေအနေခြင်း ကွဲပြားပါတယ် ။
အဘဖောကို ထပ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ် ။ အဘအပေါ် ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက် သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အဘဖော ကော်မန့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ
ဦးဖော ကလုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ လေးစားပါတယ်။ အမုန်းခံပြီး လူကြိုက်မများတဲ့အမှန်တရားတွေကိုရေးတာရယ်။ ဂေဇက်ကစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို မစဉ်းစားခိုင်းတော့တာကြာပေါ့။
sorrow weaver ရေ
အခုလို သတိတရ ဓါတ်ပုံပိုစ်တွေကိုပြောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွာထဲကို 2010 ဇွန်လမှာ စရောက်တာဗျာ။
နောက် 2010-2011 စာတွေအများကြီး ရေးဖြစ်ပါတယ်။
2011မှာ ဓါတ်ပုံလဲ တွဲတင်ပါတယ်။
2011-2012 မှာ စာရော ဓါတ်ပုံရော ဘုံးဘောလအောကိုတင်ခဲ့ပါတယ်.
2013 သင်္ကြန်အပြီးမှာတော့ စာဘဲ တစ်ပါတ်ကို တစ်ပုဒ်လောက်ဘဲရေးပါတော့တယ်။
ဓါတ်ပုံပိုစ်တွေကို လူတွေသိပ်စိတ်မ၀င်စားကြတော့ဘူးလို့ ထင်တာကြောင့်ရယ်
ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး ဆောင်းပါးတွေ ၀တ္တုတွေနဲ့ ၀င်ခဲ့တာပါ။
စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော့ ကိုပေါက်လက်ဆောင်အတွေးစဉ်ကဗျာများတော့ ရေးပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဖေစ်ဘုတ်မှာ စာမျက်နှာလုပ်ပေးထားသူရှိတော့ အဲဒိစာမျက်နှာမှာဘဲ
ဒါပေမယ့် အရေပါးတယ်လို့တော့ သူများတွေသတ်မှတ်တဲ့ အသံကိုပြန်ကြားရပါတယ်။
ဝေဖန်ခံရရင် သည်းမခံဘဲ ပြန်တုန့်ပြန်တတ်တာကြောင့်ပါ။
အရေပါးတယ်ဆိုတာ သဘောထားသေးသိမ်တယ်လို့ များ အနက်ကောက်ရင်ရမလား မသိဘူး။
ကျနော်က ရေမရောတဲ့ မန်းလေးသား စစ်စစ်ကြီးပါဗျာ။
လက်ဆော့ တဲ့ ၀ါသနာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
ကဝေစာရင်းထဲမှာ ကျနော်မပါ ပါဘူးဗျာ။
ဦးပေါက်ရေ …ဓါတ်ပုံပို့စ်တွေ အားပေးနေတယ်ဆိုတာ သိစေလိုပါတယ် ။ ရန်ကုန်မှာမို့ပါ ။ ပြင်ဦးလွင်မှာ သာရှိနေခဲ့ရင် စိန်ပန်းပွင့်ချိန်နဲ့ ရေချမ်းအိုးနားက နှင်းဆီ စိုက်ခင်းကို လိုက်ပို့ချင်ပါတယ် ။
မေမြို့ကတော့ မဒမ်ပေါက်ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေမြို့ဖြစ်လို့
ဆိုင်ကယ်နဲ့ မေမြို့ တက်ရတဲ့ ခံစားမူ့ကို နှစ်သက်တာလဲ ပါပါတယ်.
ရေချမ်းအိုးနားက နှင်းဆီခင်းတွေက နည်းသွားပြီ
မေမြိုနဲ့မန်းလေး ဆိုင်ကယ်နဲ့လာရင် အလွန်ဆုံးမောင်းရလှ 2နာရီပါဘဲ။
ဦးပေါက်ရေ …မေမြို့ ပြန်လာဖြစ်ရင် ဆက်ဆက် မန်းလေးကိုဝင်လာပြီး ဂါရ၀ပြုပါမည်
မြန်မာစကားအရကောက်ရင်.. အရေမထူတာဟာ.. သဘောထားသေးသိမ်တယ်နဲ့မတူပါကြောင်း…။
Obama, the Thin-Skinned President – Politics
May 27, 2010 – Not surprisingly, Obama’s thin skin leads to self pity. As Daniel Halper of The Weekly Standard pointed out, inafundraising event for Sen.
နာ သာ ကဝေ ဖြစ်ရင် စိုင်းလေး နာ့ကို ချစ်လာအောင်ပြုစားမယ်။
နာ သာ စုန်းဖြစ်ရင် စိုင်းလေးကို တံမြက်စည်းပျံပေါ် တင်ပြီး ခိုးပြေးမယ်။
အဲဒီ အရေးလေး အတုခိုးရမယ်။
နောက်ဆို ပို့စ်အဆုံးသတ်မှာ သဂျီးနော် ၊လာမမန့်ရင် နောင်မရေးတော့ဘူးလို့ ရေးအုံးမယ်။
(အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့Aung La Nsang (အသံမထွက်တတ်)ကိုလည်းအားပေးကြပါတယ် ဒူဝါရယ်။)
Burmese Python လေး ကိုလားဗျ …အန်တီ ပဒုမ္မာ …
အဟမ်း အဟမ်း အဟင်းအဟင်း… အဟွတ်အဟွတ်
ဘာဆက်ပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး သူက ကဝေလည်းဆိုသေး
ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေရှိသင့်တယ်ဆိုတော့ .. ငါတို့ကို ဘဲဥကြက်ဥလို့ပြောတာလား
မြှောက်ပဲ မြှောက်ရတော့မှာလိုလို .. ဆန့်ငင်ငင်ဖြစ်သွားတယ် …
ကဝေတွေအကုန်ဖမ်း ..ရုံသွင်းပြစားပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးချဲ့တင်တာပဲကောင်းတယ်
အဟမ်..သူကြီးဆီပို့လိုက်လေ သူကသရဲအရှင်ဆိုရင် မီလီယံနဲ့ပေးမှာဆိုတော့။ ခုလိုကဝေဆိုရင် အစွမ်းထက်တော့ ဘီလီယံနဲ့ပေးမယ်ထင်တယ်။ ပြီးရင်းရှယ်ယာခွဲပေးပါ..
ဆာရိုးဝီဝါ ပလီပလာ နဲ့ မနှင်းဖြူရေ။
ကိုင်း . ဒူးဝါး​ရေ…
ဦးဆာကို သိပါတယ်ဂျာ…ဦးဆာက မင်းသားပဲဟာကို
ဆောရိုးဝီဗာက ရန်တိုက်တတ်သကိုး…။ ခရစ်နဲ့ ကြေးမုံဂျီး နှစ်ယောက် အတူတွဲရေးလိုက်တော့ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး အပြိုင်စီးထားတာ အဘိုသွားရှင်းရမီဒုံး…။ သူရို့ဂို စနေ၊ တနင်္ဂနွေ တရက်စီ သတ်မှတ်ပေးတာ ဒီပုံနဲ့ဆို သိကုန်ဒေါ့မှာဗဲ…။ ဖီးကြမ်းဈေးကလည်း ကြီးပါ့…..
လူအထင်ကြီးအောင်စာတွေဘယ်လိုရေးနေရေးနေ.. စရိုက်မှန်ကဖုံးမရဘူး.. တကယ့်ကိုသုံးစားလို့မရတဲ့စရိုက်ပဲ.. သည်းခံနေတိုင်းလည်း ငပေါထင်မနေနဲ့.. :evill:
အထင်အလွဲပါနဲ့ ခရစ်လေးရယ်… ဦးကြောင်နဲ့ ကြေးမုံဂျီး ဘာမှ အဖြစ်ရပါဗူး..။ သူ့ မြင်တောင် အမြင်ဗူးဘူး.. ဖျာပေးပေး ကြမ်းပေးပေးပါ..။ တိတ်တော့နော် အငိုနဲ့… ဦးကြောင် ဘယ်ဆိတ် အကောင်းပါ့မဲ…။ ဟေ့လူ ဆောရိုဝီဗာ … ခင်များမွှေတဲ့မီး လာငြိမ်းအုံး.. ဒီမှာ ပြောလို့ မဆုံးသေး ပြသနာတက်ပီ…။ ကြောင်ကြီး သစ်ဆာရှင်ကွ… ပေးဒိုင်းယူ ကျွေးဒိုင်း အစားဗူး.. လစ်မှတီးတာ…
ဒူးဝါးကြီးရေ.. (CD: Sayar Kaung)
အကူအညီတောင်းစရာလူတစ်ယောက်တော့ရပြီး.. ယူအက်စ်ကို Ethiad လိုင်းနဲ့ online က လက်မှတ်ဝယ်တာဈေးတော့ တော်တော်သက်သာပါတယ်.. ဒီဖက်မှာ အော်ပရိတ်လုပ်ပေးတာ.. ဘန်ကောက်အဲဝေးဖြစ်နေလို့ အိတ်အပိုသယ်တာအတွက်နည်းနည်းဒွတ်ခရောက်သွားတယ်.. KZ အကြိုက်မင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့တူတဲ့တစ်ယောက်ထင်တယ်.. နောင်အကူအညီတောင်းရအောင်မေးထား တာ.. :loll:
ခရစ်လေးဂို ဘယ်လိုင်းဂ အိတ်ပိုဂျေး ချသလဲပေါဇမ်း..။ လွတ်သွားလို့ပေါ့ကွာ သိလိုက်လို့ကတော့ အွန်လိုင်းဂနေ ဘဏ်ကတ်နံပါတ် ရအောင်ခိုးတယ်။
ဂျိုကိုင်ပီး တောင်းပန်ပါဒယ် ခရစ်လေးရယ်.. ခြစ်လို့စမိဒါ ဆိတ်အဆိုးဗာနဲ့…။ ယူအက်စ်ကို လာမို့လား..။ ဖလော်ရီဒါနားဂ ဂွာတာနာမိုဘေး မှာ ဦးကြောင်ရှိမယ်….။ လုံခြုံသလား အမေးနဲ့ အဘူမှ လာနှောက်ယှက်လို့ အရဗူး… ဒို့ခြစ်ခြင်းဂို….
ဆ ရာ ကြောင်ကြီး လတ် တ လော Detroit မှာ နေ သ လား လို့ ???
မမခရစ် Ethiad လိုင်းက လိုင်းကြီးဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေ သူ့ဈေးနှုန်းက ထင်မထားလောက်အောင် သက်သာပါလေရဲ့ …United Arab Emirates ရဲ့ အဘူဒါဘီမြို့အထိဆိုရင် PG ( Bangkok Airway ) နဲ့ alliance လုပ်တာမျိုးတော့ရှိပါတယ်…Online ကဖြတ်ဝယ်တဲ့လက်မှတ်မျိုးဆိုရင် ဘန်ကောက်ကနေအစလက်မှတ်အတွက် ကီလို 30 လောက်ပရိုမိုးရှင်းပေးတတ်သော်လည်း ရန်ကုန်ကနေလက်မှတ်ကို Other Airline က ကီလို 20 ပဲပေးတတ်တာမျိုးဆိုတော့ကာ …နောက်များ မမခရစ်ရယ်..လက်မှတ်ထုတ်ပြီးရင် ဘန်ကောက်အဲဝေး ကို တချက်ပြန်confirm လုပ်ပေးတာမျိုးက အမှားအယွင်းနည်းပါလိမ့်မယ် ။ လေဆိပ်မှာလည်း connecting sector ကိုတစ်ခါထဲပြောပြီး Baggage transfer လုပ်ခိုင်းတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ။ ရန်ကုန်ကနေ ပြန်ချိတ်မယ့်လေကြောင်းလိုင်းတွေအတွက်က ဘန်ကောက်မှာ Transit အနည်းဆုံး2နာရီလိုအပ်တယ်ဆိုတာလဲ သတိထားစေချင်ပါတယ် ။
စနိုးဝီဗာရေ ခရစ်ကို လွှတ်ထားလိုက်ဗျာ… ဗန်ကောက်မှာ လေယဉ်ပျံ လွတ်ပလေ့စေ… အဲဒကြမှ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ကိုကိုကြောင်ကြီး သာမီးဂို ကယ်ပါအုံးဆိုလို့ဂဒေါ့ … ငှဲလျောင်း ငှဲလျောင်း… သိဂျရောပေါ့ကွာ… ခွီးဂရား…
အကုန်လုံး တန်းစီ ရေးချသွားပြီး ကျုပ်က ဘယ်နား မေ့ခဲ့သတုံးးးး
ကဗျာပြခန်းကို ဝင်မန့်မှ၊ ပြခန်းအတွက် ကဗျာပို့ပေးမှ ကြေမယ်
အေး..တဂျား…နာပေါတောတော ရေးထားတာတော့ ရှိသဟ …ပို့မယ်နော် နာက ပေါတောတောပဲရေးတတ်တာရယ်
ရွာသူဆိုတော့လည်း ကဝေ ပေါ့နော်။
စာရေးအားကောင်းတဲ့ ဒူးဝါးလေးရဲ့ စာတွေကိုလည်း အားပေးနေပါတယ်။
ပေါတောတောပဲရေးတတ်တာမို့ သည်းခံဖတ်ပေးပါ အန်တီမမရယ်…
တဂျီးတောင် တုန်ဆင်းလာရဒဲ့ပိုစ့်ပါလားဟရို့။ ဒဂျီးဝင်မန့်တယ်ဆိုကတဲကတော့ တော်ရုံတန်ရုံမဟုတ်။
ဦးဦးဆာမိ , အန်တီပဒုမ္မာ , မမTNA တို့လို ရွာ ဆယ်လစ်ဘရစ်တီတွေ လာမန့်တော့လဲ ..အလွန်ဝမ်းသာ အာဟိ
ကဝေဆိုတော့… ထမီခြုံလိုက်ရင် နာ..ဟိုငှက်ဖစ်ပီပေါ့နော်….
စကပ်ခြုံရင်တော့ ဘာဖစ်မှာပါလိမ့်… :harr:
ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်နော်..မမ ..အဲ့မျိုးကတော့ ..အဟီး
ကဝေတွေ ဘူတွေများရဲဆိုပီး ၀င်ဖတ်တွားဒယ်နော်…
အချို့သော စတုမဟာရာဇ်အနွယ်ဝင် ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့သည် နတ်အဖြစ်ကိုရလင့်ကစား မိမိတို့ပြုမိခဲ့သော မကောင်းကံကြောင့် လူတို့၏ဝမ်း၌ စံအိမ်ပြု၍နေကြရသည်။ ထိုနတ်မျိုးတို့သည် မိမိတို့၏အမှတ်အသားဖြင့် လပြည့်လကွယ်၊ အဖိတ်ဥပုသ်နေ့ ညအခါမျိုး၌ တောက်စားမြူးတူးကြလေသည်။ ရံဖန်ရံခါ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ပညာပြိုင်တတ်ကြ၏။ ၄င်းတို့ကိုပါဠိဖြင့် ဇုဏှ ဟုခေါ်ကြပေသည်။ ဇုဏှ မှမြန်မာမှုပြုကာ စုန်း ဟုခေါ်လာကြပေသည်။
မူလမွေးစကပင် ဝမ်းတွင်း၌ဂန္ဓဗ္ဗနတ်စံအိမ်ပါလာသော ဝမ်းတွင်းစုန်းနှင့် မိမိကိုယ်တွင်း၌ နတ်စံအိမ်တည်ဆောက်ကာ နတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ယူသော(ပညာသည်တို့ထံမှ စုန်းပညာသင်ထားသော) စုန်းဟူ၍တွေ့ရသည်။
စုန်းများကိုအရင်းခံအားဖြင့် ၇ မျိုးခွဲထားသည်။
သစ်သီးအမှည့်များ၊ အချိုအချဉ်အရသာများကိုသာစား၏။ ခြေရာကိုလည်းကောင်း အရိပ်ကိုလည်းကောင်း ထိရမှပြုစားနိုင်၏။
အသွေးအသားအရေ တို့ကိုစား၏။ မြင်ရ ထိရ အနံ့ကိုရ ရုံဖြင့်ပြုစားနိုင်၏။
အသည်းအမြစ်၊ ဥတို့ကိုစား၏။ မြင်ရ ထိရ အနံ့ကိုရ ရုံဖြင့်ပြုစားနိုင်၏။
အဆီအဆိမ့်၊ အကြော်အလှော်တို့ကိုစား၏။ အမည်ကိုသိရရုံဖြင့်ပြုစားနိုင်၏။
လူ့အသွေးအသားအရိုးတို့ကို စား၏။ အမည်သိရုံဖြင့်ပြုစားနိုင်၏။
၄င်းတို့အနက် ခြေစုန်း၊ခေါင်းစုန်း၊ကိုယ်စုန်း၊မောက်လုံး၊မောက်ပြားတို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုစားမှရ၏။ အိမ့်တလိမ့်နှင့်ကဝေမြောက်တို့မှာ ဇော်ဂနီနတ်၊ ဥရူနတ်၊ နှဲခရုနတ်စသော အောက်နတ်ကြီးများကို အမှီရ၍ ၄င်းနတ်တို့ကို စေလွှတ်ပြုစားတတ်၏။
ခြေစုန်း၊ခေါင်းစုန်း၊ကိုယ်စုန်းတို့မှာ ဖျားအောင်နာအောင်လန့်အောင်သာပြုစားနိုင်၏။ မောက်လုံးမောက်ပြား၊အိမ့်တလိမ့်နှင့်ကဝေမြောက်စုန်းများမှာ သေသည်အထိ လက်ကုန်ပြုစားတတ်၏။
ထိုအရင်းခံစုန်း ၇ မျိုးတို့ကို အကျယ်ပွားသော် စုန်းမျိုး ၉၉ မျိုးရှိလေသည်။
၁။စမျည်းတိုင်စုန်း ၆ မျိုး
၂။ရူပဝိပရိစုန်း ၆ မျိုး
၃။ကုဋဒိဗ္ဗစုန်း ၁၂ မျိုး
၄။နာနာရူပစုန်း ၉ မျိုး
၅။ကုလဝံသစုန်း ၇ မျိုး
၆။ဗာလိစုန်း ၇ မျိုး
၇။စက်စုန်း ၄ မျိုး
၈။ကဝေပျံစုန်း ၉ မျိုး
၉။ဂန္ဓဗ္ဗစုန်း ၇ မျိုး
၁၀။နာဂဝံသစုန်း ၄ မျိုး
၁၁။ စဏ္ဌာလစုန်း ၆ မျိုး
၁၂။ တေဇစုန်း ၆ မျိုး
၁၃။ ဘက္ခစုန်း ၇ မျိုး
၁၄။ တိရစ္ဆာန်စုန်း ၉ မျိုး တို့ဖြစ်သည်။
၁။စမျည်းတိုင်စုန်း ၆ မျိုးမှာ
၂။ရူပဝိပရိစုန်း ၆ မျိုးမှာ
ဤ ၆ မျိုးကားအမောက် သုံးဆယ်စီရှိ၏။ တန်ခိုးကြီး၏။ နာနာရုပ်
၃၀ စီ ဖန်ဆင်းနိုင်၏။
၃။ကုဋဒိဗ္ဗစုန်း ၁၂ မျိုးမှာ
၁။စုန်းသူကြွယ် ( ထိပ်လယ်၌အမောက်ရှိ၏။)
၃။စုန်းဖုတ် ( ရင်၌အမောက်ရှိ၏။)
၄။စုန်းမာတြာ ( နံစောင်း၌အမောက်ရှိ၏။)
၅။စုန်းတွတ်သို ( နှာဖျား၌အမောက်ရှိ၏။)
၆။စုန်းကြက်တက် ( ခြေဖျား၌အမောက်ရှိ၏။)
၈။စုန်းအောင်း ( ချက်၌အမောက်ရှိ၏။)
၉။စုန်းပဝါပြောက် ( ဝမ်း၌အမောက်ရှိ၏။)
၁၀။စုန်းသမယ ( ခြေသလုံး၌အမောက်ရှိ၏။)
၁၁။စုန်းကဗ္ဗေ ( ထိပ်လယ်၌အမောက်ရှိ၏။)
၁၂။စုန်းညီနောင် ( မေးဖျား၌အမောက်ရှိ၏။)
၄။နာနာရုပ်စုန်း ၉ မျိုးမှာ
၅။ စုန်းဘီလူး (မျိုးကွဲ)
၅။ကုလဝံသစုန်း ၇ မျိုးမှာ
၆။ဗာလိစုန်း ၇ မျိုးမှာ
၇။ သားစားစုန်း တို့ဖြစ်သည်။
၇။စက်စုန်း ၄ မျိုးမှာ
ဤစုန်းတို့၌အမောက်မရှိ၊ စက်ဝန်းလေးခုစီပိုင်၏။ တန်ခိုးကြီး၏။ သာမန်ဆရာများ မသိနိုင်ပေ။
၈။ ကဝေပျံစုန်း ၉ မျိုး
၉။ ကဝေပျံစုန်း တို့ဖြစ်သည်။ ဤစုန်းတို့သည် အလိုရှိသောအခါ ခါး၌အမောက်များရောက်ရှိကြသည်။ ပရိယာယ် မာယာအလွမ်များ၏။ တန်ခိုးအစွမ်းကြီး၏။
၆။ အိမ့်တလိမ့်စုန်း (မျိုးကွဲ)
၇။ ဇော်ဂနီစုန်း (မျိုးကွဲ) တို့ဖြစ်သည်။ တန်ခိုးအန်ိမ့်အမြင့် မျိုးစုံရှိ၏။
၁၀။ နာဂဝံသစုန်း ၄ မျိုးမှာ
၄။ မောက်ရှည်စုန်း တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ဒေါသကြီး၏။ ၃ကြိမ်အမှားခံ၍ ၄ကြိမ်မြောက်တွင် အသေပြုစားတတ်၏။
၁၁။ စဏ္ဌာလစုန်း ၆ မျိုးမှာ
တေဇစုန်း ၆ မျိုးမှာ
၆။ကျားစုန်း တို့ဖြစ်သည်။ဤစုန်းများသည် လက်ဝဲနားတွင်အမောက်အစီအရီ ရှိသည်။ အခြားစုန်းတို့ထက် တန်ခိုးထက်မြက်၍ အမျက်အငြှိုးလည်းကြီး၏။
၁၃။ဘက္ခစုန်း ၇ မျိုးမှာ
၇။ အဆီစားစုန်း တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတိုသည် ရမက်အလွန်ကြီး၏။
၁၄။ တိရစ္ဆာန်စုန်း ၉ မျိုး
၉။ ဝါးစုန်း တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စုန်းတို့၏ အခိုးအငွေ့ကြောင့်ဖြစ်လာသည်။
ဤသို့ဖြင့် စုန်းအမျိုးကြီး ၁၄ မျိုး၊ မျိုးစိတ် ၉၉ မျိုးရှိလေသည်။ အမျိုးကို အစွဲပြု၍ ကြိုး ဟုခေါ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကြိုးပေါင်း ၁၄ ကြိုးရှိသည်။ အရပ်ကခေါ်ကြသော ၁၂ကြိုးဆိုသည်မှာ ၁၂ကြိုးမြောက် တေဇစုန်း ၆ မျိုးတို့သည် စုန်းတို့အနက် တန်ခိုးအထက်မြက်ဆုံး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဆုံး ဖြစ်သဖြင့် အထူးထင်ရှားကာ အများကရွံ့ကြောက်ကြလေသည်။
စုန်းဘဝမှ ရင့်ကျက်လာသော် “ကဝေ” ဖြစ်လာသည်။ ကဝေဘဝ မှရင့်ကျက်လာသော် “အရှင်မ” ဘွဲ့ထူးကိုရလေသည်။ ၎င်း အရှင်မ အဆင့်မှ ရင့်ကျက်လာသော် “ကတော်” ဘွဲ့ထူးကိုရလာပေသည်။ ၎င်းအဆင့်သည် စုန်းပညာ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ထို ကတော်သည် စုန်းကဝေတို့၏ ဆရာဖြစ်သည်။ ထိုကတော် တို့သည် သိဒ္ဓိ ၁၀ ပါးပြီး၏။ အကြားအမြင်ပေါက်၏။ သက်ပြောင်း ကိုယ်ခွာတတ်၏။ တစ်ကိုယ်မှ ကိုယ်ပေါင်း ၂၀ အထိခွဲနိုင်၏။ နာနာရုပ် အထောင်အသောင်းမက ဖန်ဆင်းနိုင်၏။ မိမိဘာသာနေမူ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိ၏။ သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေး၏။ ရန်သူနှင်တွေ့သောအခါ၌ကား အထူးတလည် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းကာ မျက်မာန်ဒေါသပြင်းကြကုန်၏။
ယခုကာလ၌ မြို့အရပ်တွင်ကား ၁၂ကြိုးတတ်သောစုန်းတို့ ရှားပါးသွားလေပြီ။
သို့သော်လည်း တိမ်ကောပပျောက်သွားပြီဟု မဆိုသာ။ ပညာမျိုးဆက်မပြတ်စေရန် အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းနေကြမည်သာတည်း။ တောနယ် ဇနပုဒ် အရပ်များ၌ ပညာသည်များစုကာ နေထိုင်သော စုန်းရွာများ ရှိနေပေသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တလွှားနှင့် ပုံတောင်ပုံညာဒေသ၊ ယောနယ် ဆောနယ်တို့တွင်ကား အရှင်မအဆင့်၊ ကတော်အဆင့် စုန်းကဝေများ ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
Credit >>>>>>> https://www.facebook.com/myanmar.vijjadhara
Sophia Jobs says:
အခုလို ယော၊ဆော၊ရှမ်းပြည်တွေမှာ ရှိတယ်လိုတော့ မပြောစေချင်ပါဘူး။ကျမက ယောသူပါ။ကျမမွေးကတည်းက နေနေခဲ့တယ်။ကျမ မမွေးခင်ကတော့ မပြောတတ်ဘူး။ကျမမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ စုန်းဆိုတာ မတွေ့မိပါ။အဲဒီ ပါးစပ်ရာစ၀င်ကို ဘယ်ကစလဲတော့မသိပေမဲ့ ယောသူယောသားများဟာ အထင်လွဲခံရပြီး အပေါင်းအသင်းရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာမသိတဲ့ ဒီရာစ၀င်တွေကို ပျောက်ဖို့ကူညီပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။
ဘ၀မှာ စုန်းမ (ကဝေ) ဖြစ်ချင်တာ ဒါ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပဲ။
ပထမ တစ်ခါက လေးဖြူရဲ့ စုန်းမသီချင်းကို ကြားမိတဲ့အချိန်
ခုတစ်ခါကက ရွာသူဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူချင်လို့..
ကျော်လဲ ရွာသား အသစ်ဖြစ်တာတကြောင်း…ရွာထဲက စာကောင်းစာပေတွေမတူးဆွနိုင်သေးတာတစ်ကြောင်းမို့ …ဖတ်မိသလောက်လေး နယ်ပယ်စုံက ကဝေတွေကို ရေးလိုက်တာပါ..တကယ်က ဒီရွာက ကဝေရွာဗျ…